October 21, 2021 - Channel Lover
ယနေ့ Mytel ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင် ဖောက်ခွဲဖျက်စီးခံရသည့်(ရုပ်သံ)
October 21, 2021 by Channel Lover
အရာတော်၊ အောင်သာကုန်းရွာအနီးမှ Mytel တာဝါတိုင် ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံရ (ရုပ်/သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၁ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ အောင်သာကုန်းကျေးရွာအနီးရှိ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုပိုင် Mytel ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်နှင့် ဆက်စပ် စက်ပစ္စည်းများအား ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီ ၂၀ မိနစ်ခန့်တွင် အရာတော် တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ ARA မှ ဗိုလ်ဘုန်းနိုင်အဖွဲ့နှင့် သပြေညို ပြောက်ကျားအဖွဲ့မှ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုပိုင် Mytel ကုမ္ပဏီ၏ ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်များအား စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များက မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ credit unicode အရာတျော၊ အောငျသာကုနျးရှာအနီးမှ Mytel တာဝါတိုငျ ဖောကျခှဲဖကျြဆီးခံရ … Read more
စစ်တပ်မှ ဒုဗိုလ်တစ်ယောက်ရဲ့ အကြံကတော့ လက်ဖျားခါရလောက်ပါပေတယ်…
ဖလမ်းမြို့က ဒုဗိုလ်တစ်ယောက် တပ်ရံပုံငွေသိန်း (၂၀၀) နဲ့အတူ မိန်းမပါ ခိုးပြေး ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့ ခလရ (၂၆၈)တပ်ရင်းက တပ်ရင်းရေးရာမှူး ဒုဗိုလ် ရဲရင့်သူဟာ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်နေ့လည် ၁၂ လောက်က မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်က တပ်ရံပုံငွေ သိန်း (၂၀၀)ကျော်ကိုထုတ်ပြီးနောက် မိန်းမကိုတခါထဲခိုးပြေးကာ ထွက်ပြေးကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ ဖလမ်းမြို့ ဒေသခံတစ်ဦးက “ဘဏ်က ရဲစခန်းမှာပြောင်းရွေ့လာတာကြာပြီ။ အဲ့မှာသွားထုတ်တာ။ တပ်ရံပုံငွေ သိန်း (၈၀၀)လောက်ရှိတယ်။ အဲ့ထဲက သိန်း ၂၀၀ ကျော်နဲ့ထွက်ပြေးတာ။ သူ့ဆိုင်ကယ်ကို ဖလမ်းအထွက် ကျင်မွှာလ်ရပ်ကွက်မှာတွေ့ကြတယ်။ ကျနော်ထင်တာကတော့ သူ့မိန်းမရဲ့ ဆိုင်ကယ် ဒါမှမဟုတ် ကားနဲ့ပြေးကြတာနေမယ်။ လက်နက်တော့မပါဘူးလို့သိရတယ်” လို့ပြောပါတယ်။ တပ်ကထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒုဗိုလ်ဟာ နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်လာတာမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရတယ်။ zalenmedia unicode … Read more
PDF တွေအတွက် အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း
ယခုအခါ စစ်ကောင်စီ ခေါင်းဆောင်များသည် ကျေးလက်ဒေသမှ ကြီးထွားလာနေသော လက်နက်က်ိုင်ခုခံမှုနှင့် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် (PDF) လှုပ်ရှားမှုကို အာရုံစ်ိုက်နေကြောင်း နေပြည်တော်ရှိ စစ်ဖက်လုံခြုံရေးရာ အသိုက်အဝန်းနှင့် နီးစပ်သည့် သတင်းရင်းမြစ်များက ပြောသည်။ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များနှင့် ရွာသားများကို “ရှင်းလင်းရန်” အမိန့်ကို ယခုလအတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုကိစ္စကို သိရှိသော သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းက PDFs များကို အမြစ်ဖြတ် ချေမှုန်းရန် သူ၏တပ်မှူးများနှင့် တပ်ဖွဲ့များအားလုံးကို အမိန့်ထုတ်ပြန်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ အမြစ်ဖြတ် ချေမှုန်းရန် အမိန့်နှင့်အတူ စိုးဝင်းက ရွာသားများနှင့် PDF များ ဆက်သွယ်ခြင်းကို တားမြစ်သည့် အမိန့်နှင့် ထိုအမိန့်ကို မလိုက်နာပါက ပြင်းထန်စွာ … Read more
စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲက PDF တွေကို မကျေမနပ်နဲ့ စကစကို အကြံပေးလိုက်တဲ့ ရွှေရူပါဦး
ရွှေရူပါဦးက အခုလိုဘဲ အားမလို အားမရဖြစ်တာတွေက်ုပြောလာတာပါ။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဟာ အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းမှုကို ထိရောက်စွာ မလုပ်ခဲ့ ဘူး။ ဒါကြောင့် အကြမ်းဖက် PDF ဟာ စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲမှာ ပိုမိုကြီးထွားလာ ခဲ့တယ် ဒါကြောင့်လဲ စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲ ကနေ တာဝါတိုင်တွေ ဖောက်ခွဲ ဖျက်စီးအောင်မြင်မှုကနေ တစ်ခြားတိုင်းပြည်နယ်တွေကို ပါ ကူးစက်သွားခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ နှိမ်နင်းစရာရှိတာကို မနှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ အကြောင်း ကြောင့် အခု အကျိုးဆက်တာဝါတိုင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ ဖောက်ခွဲဖျက်စီးခံရတော့ မယ်…….စိတ်ရှည်သလို သည်းခံသလို တွေ လုပ်ပြပြီး နံမည်ကောင်းယူမယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး ကြောင် ခြင်းအကြောင်း ရဲ့ အကျိုးဆက်တွေပဲ ဖြစ်နေတယ်…..တစ်ဖက်က DDay ခေါ်ပြီး စစ်ကြေညာ တယ် လက်နက်ကောင်းမရှိပေမယ့်လည်း လူအင်အား သိန်းချီ ရှိနေလောက်ပြီ…. မနေ့က … Read more
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မရေးသင့်ဘူးဆိုပေမယ့်လဲ ရေးမှဖြစ်မှာမို့ရေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ဘာကြောင့်ရေးလိုက်ရလဲဆိုတော့ ကျနော်အသိမိန်းခလေးတွေ cbမှာလာမေးကြတယ် မြမြဆိုတာဘာလဲတဲ့ ဖြေဖို့မသင့်လို့ မဖြေပေးလိုက်ဘူး ဒါပေမယ့်သူတို့ကတကယ်သိချင်နေတာဆိုတော့ တခြားလူကိုသွားမေးပါတယ် အဲ့ဒိလူက video ဖိုင်နဲ့ပြလိုက်တယ်ဗျ ပြီးတော့အဲ့ကောင်မလေးတွေကို သူမြမြvideo ပို့ခဲ့ရကြောင်း ပုံတွေနဲ့ ဖေ့ဘွတ်မှာတင်လိုက်တဲ့အတွက် ကောင်မလေးတွေခမျာ့ အရှက်မရသင့်ပဲရသွားရှာပါတယ် ဒါကြောင့်တင်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ မြမြ ဆိုတာဘာလဲ… မြမြဆိုတာ အစားထိုးနာမည်အဖစ် အသုံးပြုထားတဲ့ မိန်းခလေးနာမည်ပါ လင်မယားလို ကာမဆက်ဆံတဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲက သရုပ်ဆောင်မိန်းခလေးရဲ့ နာမည်ပါ မိန်းခလေးတယောက်ကို လင်မယားလို ကာမဆက်ဆံဖို့ အမျိုးသားကစည်းရုံးအပီး လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပြီး အဲ့ဒီvideoဖိုင်ကို လိုင်းပေါ်မှာ ပိုက်ဆံနဲ့ပြန်ရောင်းစားတာပါ အဲ့ဒိလို ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ဆင်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ ကာမဆက်ဆံတဲ့ video မျိုးမြန်မာပြည်မှာ အခုနောက်ပိုင်းအရမ်းပေါလာပါတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ လောက်ကလဲ ခရမွးပြာ အမည်နဲ့ ဇာတ်ကားထွက်ခဲ့ပြီး ရိုက်ကူးသရုပ်ဆောင်သူတွေအဖမ်းခံခဲ့ရပြီး … Read more
ယမန်နေ့ည သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ ဘုရားဆီမီး ဆက်ကပ် လှူဒါန်း ပရိတ် ပဌာန်း ရွတ်ဖတ်ပူဇော် နေသော ကလေးမြို့ အောင် ရတနာ ကျောင်း ဆရာတော် လူယုတ်မာ များရဲ့ လုပ်ကြံ မှုကြောင့် ဘ၀နတ္ထံ ပျံလွန်တော်မူ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ဆရာတော် အရှင်သူ မြတ် ဘုရား ကောင်းတဲ့ ဘုံ ဗိမ္မာန် ကောင်းတဲ့ ဘုံ ဘ၀မှာ ကောင်းစွာ အနားယူနိုင်ပါစေ ခုလို လူယုတ်မာ တွေနဲ့လည်း ဘ၀ အဆက်ဆက် မကြုံဆုံ ရပါစေနဲ့ 😔😔😔 အောင်ရတနာကျောင်း(စန္ဒာကျောင်း)ရှစ်မျက်နှာဘုရားက အုတ်တံတိုင်းဘေးမှာ၊ဆရာတော်က ညစဉ်ပရိပ်၊ပဌာန်းရွတ်ဖတ် ပူဇော်နေတာကြာပါပြီ၊ လပြည့်ညက ကျောင်းကဆရာတော်ကြိးနဲ့ သံဃာအားလုံးည ၇နာရီကျော်မှာ ကျောင်းဝန်းအတွင်း မီးဖယေင်းတိုင် လိုက်ထွန်းပူဇော်ကြပြိးနောက်၊ ၈နာရီ လောက်မှာမိမိကျောင်းဆောင် … Read more
ဆရာတော်တစ်ပါး မောင်းနှင်လာသည့်ယာဉ် တိမ်းမှောက်ပြီး ဆရာတော်၊တစ်နှစ်သားကလေးငယ်နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံး ရန်ကုန်၊အောက်တိုဘာ-၂၁(PeopleMedia) ယနေ့ နံနက် ၉နာရီအချိန်ခန့်က ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမ မိုင်တိုင် (၉၈မိုင် ၁ဖာလုံ)အနီး၌ PRADO ယာဉ် တစ်စီး တိမ်းမှောက်ပြီး ယာဉ်မောင်းအပါအဝင် ယာဉ်ပေါ်လိုက်ပါလာသူ သုံးဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဖြစ်စဉ်အပေါ် သွားရောက်ကူညီပေးခဲ့သည့် လူမှုကူညီရေးအသင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက PeopleMedia ကို ပြောပါတယ်။ “ယာဉ်မောင်းက ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ ယာဉ်ပေါ်မှာ တစ်နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ယောက်နဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါတယ်။ ၃ယောက်လုံး ပွဲချင်းပြီးဖြစ်သွားတယ်လို့”လူမှုကူညီရေးအသင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ အဆိုပါ ယာဉ်သည် ရန်ကုန်-နေပြည်တော် လမ်းပိုင်း၌ တိမ်းမှောက်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိရက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းပိုင်း၌ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် မကြာခဏ ယာဉ်မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ “အမြန်လမ်းမှာက မိုးရွာရင် လမ်းမမှာ ရေစီးတဲ့ ဖြတ်လမ်းပိုင်းနေရာတွေရှိတယ်။ … Read more
စခ ရင်းမှုးကတော် ကန်တော့ခန်း။ ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ မနေ့က နေကြာကိစ္စဟာ ရိုးရိုးသားသား ဝတ်ကြတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဒီဖိုင်ကသက်သေပဲ။ ထုံးစံအတိုင်းပါဘဲ။ ယတြာ ထေရဝါဒနဲ့ ဆန့်ကျင့်ဖက်လုပ်ပြီလေ။ သြကာသ ကန်တော့တာတဲ့ ကန်တော့ဖို့စာတောင် မစီတတ်တာလား။ ဘုရားကန်တော့တာကို လူကို သွားကန်တော့နေတယ်။ အဲ့လောက်တောင် မသိကြဘူးလား။ စောက်ကျိုးတွေတော့ နဲကုန်ပါပြီ။ နေကြာနဲ့အတူ နာကြေကြပါစေ။ ကြိုပြီး သရဏဂုံတင်ထားကြ။🙏🙏🙏 creidt unicode စခ ရငျးမှုးကတျော ကနျတော့ခနျး။ ရုပျသံကို အောကျဆုံးတှငျ ဖျောပွထားပါသညျ…။ မနကေ့ နကွောကိစ်စဟာ ရိုးရိုးသားသား ဝတျကွတာ မဟုတျဘူးဆိုတာ ဒီဖိုငျကသကျသပေဲ။ ထုံးစံအတိုငျးပါဘဲ။ ယတွာ ထရေဝါဒနဲ့ ဆနျ့ကငျြ့ဖကျလုပျပွီလေ။ သွကာသ ကနျတော့တာတဲ့ ကနျတော့ဖို့စာတောငျ မစီတတျတာလား။ ဘုရားကနျတော့တာကို လူကို … Read more
ထောင်ထဲမှ အနုပညာရှင်တွေကို လူပါးဝစကားပြောလာတဲ့ ရွှေရူပါဦး
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ မော်ဒယ် ရွေရူပါဦးကတော့ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ မော်ဒယ်တစ်ယောက်လို့ သူမကိုယ်သူမ ပြောနေကြပေမဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ သူမကိုတပ်ချစ်သူလို့ပဲ သိထားကြပါတယ်နော်. တစ်ချို့ဆိုရင်သူမကို ခုမှမြင်ဖူးတာဆိုပြီးတောင် ရေးသားနေကြပါတယ်။ မကြာခင်ရက်ပိုင်းတုန်း.ကတော့ သူမကို အဘတွေ.က စီစဉ်ပေးမှုတစ်ခုကြောင့် ကားတွေပါပိုင်ဆိုင် ချမ်းသာလာပြီဆိုလို့ လူတွေ..အကြား ပွဲဆူသွားရပြန်ပါ.တယ်နော်.. အခုလဲ လူပြောများ.နေတဲ့ သူမရဲ့ခြေထောက်ဟာ လူတွေ ထင်နေသလို ဆင်ခြေထောက်မ.ဟုတ်ကြောင်း ဟိုနေ့က သက်သေနဲ့.တကွ ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်နော် အခုလဲ ဒါ့အပြင်သူမကို အားပေးတဲ့ ပရိသတ် သောင်းချီ ရှိကြောင်း ပုံလေးနဲ့ သက်သေပြခဲ့ပါသေးတယ် ဒါဟာ အမှန်ဆိုရင်သူမ ရဲ့ ဖန်အင်အားက မသေးဘူးဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးလဲ မြင်မိမယ်ထင်ပါတယ် ဒါဆို သူမရဲ့ Fandom nameကို Shweze လို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော် သူမကတော့ အခုထိ ဇာတ်ကားတကားမှ မရိုက်ဖူးသေးပါဘူးနော် … Read more
စစ်ကြောရေးရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာမှုတွေကို ဖွင့်ပြောလာတဲ့ လွတ်မြောက်လာသူ မရွှေရူပါလင်း
“စစ်ကြောရေးမှာတော့ သူတို့သိချင်တဲ့အချက်အလက် မရမချင်းရိုက်ပြီးတော့မေးတယ်။ ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ လူကိုနံရံကိုမှီထားပြီး ကျောက်ခဲတွေနဲ့ပေါက်တယ်။ သေနတ်တွေနဲ့ ထောက်ပြီးခြိမ်းခြောက်တယ်။ အိမ်သာရေတွေနဲ့လည်း ရေချိုးခဲ့ရ ၊မျက်နှာသစ်သွားတိုက်လုပ်ခဲ့ရတယ်။” ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ (၁၇)ရက် က ရန်ကုန်မြို့အလုံကွင်းကျောင်းလမ်းမှာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုက လူငယ် ၄ ဦး ဟာ အောက်တိုဘာ ၁၉ရက်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။ အဲဒီထဲက မရွှေရူပါလင်း ရဲ့ စစ်ကြောရေးနဲ့ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံတွေ ၊ တခါ ထောင်တွင်းမှာ အတူနေ အနုပညာရှင်အချို့နဲ့အတူဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း unicode “စဈကွောရေးမှာတော့ သူတို့သိခငျြတဲ့အခကျြအလကျ မရမခငျြးရိုကျပွီးတော့မေးတယျ။ ရုပျသံကို အောကျဆုံးတှငျ ဖျောပွထားပါသညျ…။ လူကိုနံရံကိုမှီထားပွီး ကြောကျခဲတှနေဲ့ပေါကျတယျ။ သနေတျတှနေဲ့ ထောကျပွီးခွိမျးခွောကျတယျ။ အိမျသာရတှေနေဲ့လညျး ရခြေိုးခဲ့ရ ၊မကျြနှာသဈသှားတိုကျလုပျခဲ့ရတယျ။” ပွီးခဲ့တဲ့ ဧပွီလ (၁၇)ရကျ … Read more